नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : यस्तो अवस्थामा संविधानसभाले कसरी काम गर्ला ? अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टरसँगको अन्तर्वार्ता पनि
यस्तो अवस्थामा संविधानसभाले कसरी काम गर्ला ? अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टरसँगको अन्तर्वार्ता पनि
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ । प्रत्यक्षतर्फको नतीजामा विगतको संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी तेस्रो दलमा ओर्लिएको छ भने समानुपातिकको मतगणनामा पनि त्यस्तै संकेत देखिएको छ । तर आफ्नो पक्षमा अनपेक्षित परिणाम आउन थालेपछि चुनावी प्रक्रियामा धाँधली भएको भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानसभामा भाग नलिई देशभर आन्दोलन गर्ने बताएको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाले कसरी काम गर्ला? यसको जवाफ खोज्न हामीले आज नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल, एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटा र विश्लेषक सीके लाल हुनुहुन्छ । साझा सवालको यो अंकमा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टरसँगको अन्तर्वार्ता पनि समेटिएको छ ।